Ihe karịrị ndị edemede 100 kesara ihe ọmụma ha na Akwụkwọ Azụmaahịa Ka Mma | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 23, 2017 Douglas Karr
Gịnị ma ọ bụrụ na ị ga - agwa ndị ọchụnta ego 100 ma mee ka ha kesaa nnukwu ndụmọdụ ha? Nke a bụ echiche dị n’azụ Akwụkwọ Azụmaahịa Ka Mma, oru ngo nke Tyler na ndi otu mepere Sistemụ Akwụkwọ Onwe Onye.
A Sample nke Better Business Book
Ebuputara Ihe Niile Gị: Ihe omumu nke abuo nke gosiputara na ichoghi omuma, ego ma obu aka iji bido ahia nke oma - pg. 9
Naanị ị ga-adị mma otu oge - otu n'ime ndị omenkà kachasị mma n'oge niile mepụtara ihe karịrị 50,000 dị iche iche nke bipụtara
Ihe kpatara 'Mee ihe ị hụrụ n'anya na ego ahụ ga-eso' bụ otu n'ime ihe ndụmọdụ kachasị njọ ị ga-enweta (na ihe ị kwesịrị ime kama) - pg. 17
Chọpụta ihe kpatara 99% nke ọdịda gị gara aga (Will ga-eju anya Otu ọ dị mfe) wee jiri nke a
Tzọ dị mfe iji gbaa mbọ hụ na ụjọ na oke ụjọ gwụ gị - pg. 32
Nzọụkwụ asaa m gbasoro ịme $ 7 maka Suzuki mbụ m ihe karịrị afọ 500 gara aga (Ọsọ ọsọ ruo taa) M ka na-eme usoro ndị a oge ọ bụla m chọrọ inweta ihe ukwu) - pg. 10
Agbaghara ohere dị iche iche n'ihi enweghị ahụmịhe? Ihe m mụtara n’aka onye nnọchi anya ụlọ ahịa na mkpa na mba ahụ (Onye nwere ike ịgbanye agịga agịga) nyeere m aka wuo ọtụtụ azụmaahịa na-aga nke ọma na niche dị iche iche - Site na fim na TV na mkpakọrịta nwoke na nwanyị - pg. 57
Onye nwe ụlọ oriri na ọ Frenchụ Frenchụ ndị France na-arụ ọrụ ụbọchị 9, Na-ekpuchi Mgbanwe ọzọ + Oge igafe $ 1800 Ọ bụ ezie na onye ọbịa ya, onye ndụmọdụ gbasara ego, na-eme otu ego na 35 nkeji. Choputa ihe n’eme ka ndiiche (Ntuziaka: Ọ bụghị ogo ya) - pg. 60
Ndị Dị Mma, Ndị Ọjọọ na Ndị Ọjọọ nke Rungba Azụmaahịa Ntanetị - Mụta ka esi ahụ ihe ọma, Nagide Ihe Ọjọọ, Zere Ihe Ọjọọ ma Nwee Ọ Enjoyụ Nke Ọ bụla nke Njem Ntugharị Gị - pg. 69 afọ
Echefula Ihe Learn Mụtara Na Schoollọ Akwụkwọ Azụmaahịa - Nke ahụ abụghị Otú Processre Processzụ Worksgwọ Na-arụ Ọrụ! Mụta otu esi eji OSCAR eme ihe iji mechie azụmahịa ọ bụla na-enweghị ụda dị ka onye na-ere ahịa na-ewe iwe (N'ezie, Ab Ga-enwe ike Crre Crutches na Olympic Sprinter) - pg. Ogbe 77
A họpụtara obere akpa m dị ka isi, Kwụsị ige onye ọ bụla ntị, ebe m na-akọrọ ndị kasị mma azụmahịa ihe m ọrụ na mụtara ike ụzọ… site na a n'ezie ọdachi afọ anyị n'ụlọnga. Emere m ụfọdụ mkpebi azụmahịa jọgburu onwe ya. Kedu ihe m mụtara iji nwetaghachi ụlọ ọrụ ahụ? Kedu ihe m gaara eme n'ụzọ dị iche? Echere m na ị zụrụ akwụkwọ ahụ wee hụ n'onwe gị!
Zuta akwukwo ahia ka nma
Tags: akwụkwọ azụmahịa ka mmandụmọdụ azụmahịadouglas karrPublishingibipụta onwekwụsịnụ ige onye ọ bụla ntị